Wasiiraddii socdaalka Noorweey oo weji gabax kala kulantay dhigeeda Iswiidhan | Somaliska
Wasiiraddii socdaalka Noorweey oo weji gabax kala kulantay dhigeeda Iswiidhan
Wasiiradda socdaalka dalka Noorweey haweeneyda u qaabilsan ee Sylvi Listhaug, ayaa weji gabax kala kulantay socdaal ay maanta ku timid magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan, ka dib markii dhigeeda Iswiidhan ay diiday ineey qaabisho.
Wasiiradda laanta socdaalka Heléne Fritzon, ayaa sheegtay in wasiiraddu u timid siddii ay Iswiidhan sawir qaldan uga bixin laheyd, islamarkaasina aaneey dooneey in qeyb ka noqoto ollolaha doorashada Noorweey ee maalmaha fooda inugu soo haya ka dhacayaan.
“Wasiirradda waydii go’aankaasi waxa ka dambeeyay, balse waxaan hubaa iney dhici karto arrimo aan la fileeyn” ayey tiri Sylvi Listhaug warfidiyeenadda ugu warameeysay daarta ciidan amaanka. Wasiiradda ayaa markii ay soo cagato dhigtay lugu wargeliyey in uu baaqday kulankii horey u qorsheysnaa ee ay la yeelan laheyd wasiiradda socdaalka Iswiidhan.
Wasiirad Sylvia oo haatan booqasho ku joogta magaaladda Stockholm, ayaa la sheegay in safarkeedu qeyb ka yahay siddii u kuurageli laheyd siyaasadda is dhexgalka xaafadaha Ajaanibta, iyo sideey sawir ugu heli laheyd howlaha ciidan ee amaanka la xirriira. Wasiiradan ayaa maanta booqatay xaafadda Rinkeby oo ah xaafad ay ku badan yihiin ajaanibta soomaaliduna si wey u degto.
Arrimaha haddaba loo aaneynayo in wasiiraddda Iswiidhan aanu dhigeeda u qaabilin ayaa salka ku haya qoraal ku soo baxay wargeyska dalkaasi Noorweey ka soo baxa ee la yiraahdo VG, kaas oo qoray in socdaalka wasiiradoodu salka ku hayo ololaha doorasho ee xisbigeedu ku doonayo inuu kaga qeyb galo doorashadda iyo is bar bar dhig kolka dal uu qaabilo qaxooti islamarkaasina ku fashilmo. Wasiiradda Noorweey oo hadalkeedu u muuqday mid jeed jeed ah markeey la hadleeysay wargeyska VG, ayaa sheegtay in Iswiidhan yahay mid kala faqooqan oo ey ka jiraan lixdameeyo xaafadood oo aan la geli karin “no-go-zoner” waa sidda ay hadalka i tiriye islmarkaasina ku guul dareestay siyaasadda is dhex galka, tahayna waxa ay ku sheegtay sharci darro ka jirto in awoodda gacanta ugu jirto kooxaha dembiileyaasha ah.
Hadalka wasiiradda Noorweey ayaa waxaa uu carro geliyey dhigeeda socdaalka u qaabilsan Iswiidan oo iyaduna qoraal jawaab ah oo ay u dirty wargeska VG, ku sheegtay in hadalka wasiiraddu yahay “maalayacni” aan loo baahneyn.
“Waxay ku cadeeysay wareeysigeedii ay maanta siisay wargeyska VG, iyadoo sheegtay in Iswiidhan ay ka jiraan lixdan-meeyo xaafadood oo aan la gali kari karin cabsi awgeed waana hadalo maalayacni ah” ayey tiri Heléne Fritzon, oo ah wasiiradda socdaalka Iswiidhan oo ka waabeeysay hadalka aan ka fiirsashada ee wasiiradda Noorweey, waxaana ay ugu dambeyntiin sheegtay in ay haboonaan laheyd in sifudd ay ula kulmi laheyd dhigeeda Noorweey marka uu dhaco ka dib doorashadda dalkaasi. Waiisradda Noorweey ee maanta timid magaaladda Stockholm dhulka si diblomaasiyadeed loogu jiiday, waana mid ka miijineeysa natiijadda ka dhalata siyaasadda xag jireeysan ee ay xambaarsan tahay. Wasiiraddan ayaa caan ku ah sida ay u soo saarto hindiyaal sharci oo adag, kuwaas oo ay dooneeyso in lugula dhaqmo ajaanibta dalkeeda ku sugan.
Fredrik Reinfeldt oo iscasilay